श्रीदेवीको मृ*त्युबारे नयाँ खुलासाः उनको ह*त्या भएको दावी
अघिल्लो वर्ष २४ फेब्रअरीमा दुबईको एउटा होटलमा श्रीदेवीको मृ*त्यु भएको थियो । पोस्टमार्टमको रिपोर्टका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेकी श्रीदेवीको मृ*त्यु बाथटबमा डुबेर भएको थियो
केरल प्रहरी महानिर्देशक ऋषिराज सिंहले बलिउडकी प्रसिद्ध नायिका श्रीदेवीको ह*त्या भएको दावी गरेका छन् । उनले श्रीदेवीको मृ*त्यु बाथटबमा डुबेर नभई एक ह*त्या भएको बताएका छन् । उनको यस्तो बयानपछि इन्टरनेटमा यस विषयमा बहस चलिरहेको छ ।
वास्तवमै भएको के थियो त ? धेरैलाई फेरि एकपटक यो प्रश्नले झस्काएको छ । सिंहको यो वयान उनका साथी फरेन्सिक सर्जन डा. उमादथनको सहायतामा दिएका थिए । डा. उमादथनको पनि केहि समय अगाडि निधन भइसकेको छ ।
देवीका पति तथा बलिउडका प्रोड्युसर बोनी कपूरले यस विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले त्यस्ता बकवास कुराको विषयमा कुनै जवाफ नदिने बताए । उनले कुनै प्रतिक्रिया नभएको र मनगढन्ते कुरालाई कसैले रोक्न नसक्ने पनि बताए ।
अघिल्लो वर्ष २४ फेब्रअरीमा दुबईको एउटा होटलमा श्रीदेवीको मृ*त्यु भएको थियो । पोस्टमार्टमको रिपोर्टका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेकी श्रीदेवीको मृ*त्यु बाथटबमा डुबेर भएको थियो । दुबई प्रहरीले उनको मृ*त्युको विषयमा लामो अनुसन्धानपछि पनि कुनै ठोस प्रमाण भेटिएको थिएन । यस बिषयमा धेरैले श्देरीवीका पति बोनी कपूरमाथी शंका गरिरहेका छन।